Rev. Lian Lun Cing – Full Gospel Assembly
Rev. Lian Lun Cing
သိက္ခတော်ရဆရာမဒေါ်လျန်းလွန်းကျိန်သည် ချင်းပြည်နယ်၊ ကျီးခါးမြို့နယ်-ကန့်ဆောက်ဇန်ကျေးရွာတွင် အဖ – ဦးခိုင်ဇထန် နှင့် အမိ – ဒေါ်မန်းဇဒိမ့် တို့၏ သားသမီး(၅)ဦးအနက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်၊ ကန့်ဆောက်ဇန်ရွာ တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။၁၉၈၅ သူငယ်တန်းမှ ၁၉၉၂ စတုတ္ထတန်းအထိ အ.မ.က ကန့်ဆောက်ဇန်၌ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၁၉၉၂ ပဉ္စမတန်း မှ ၁၉၉၇ နဝမတန်းအထိ အ.ထ.က ကျီးခါးမြို့နယ်တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၁၉၉၇ – ၁၉၉၈ ဒဿမတန်းကို အ.ထ.က(၁) ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် တက်ရောက်သင်ယူခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၆ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမူ့ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ မေလ၂ ရက်နေ့တွင် Rev. Thawng Za Mung ထံ၌ ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူပြီး၂၀ဝ၃ ဖေဖော်ဝါရီတွင် ဝိညာဉ်တော်နှစ်ခြင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ ဘုရားသခင်၏ခေါ်သံရပြီး ကျမ်းစာကျောင်းတက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ ၂၀ဝ၀ – ၂၀ဝ၂ခုနှစ်အထိ E.B.S တွင် တက်ရောက်ပြီး ၂၀ဝ၃ – ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်အထိ Y.T.S ၌ B.Th ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀ဝ၄ – ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်တွင် B.T.S ကျောင်းမှ M.Div ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀ဝ၇ – ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်တွင် FGBTC အပတ်စဉ်(၁၂)တွင် Diploma ရရှိခဲ့ပါ
သည်။ ၂၀ဝ၉ မေလ ၃၁ နေ့တွင်အချိန်ပြည့်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်အဖြစ်ဆက်ကပ်ပြီး၂၀၁၃ မတ်လ ၁၀ နေ့တွင် လိုင်စင်ရ ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာ ၉ နေ့တွင်သိက္ခာတော်ရ ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးချီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀ဝ၉ခုနှစ်မှစ၍ Full Gospel Assembly တွင် အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်အဖြစ်ဆက်ကပ်ခဲ့ပြီး (၁တိ – ၂: ၄ )စွဲကိုင်ကာ ဧဝံဂေလိဝေငှဟောပြောခြင်း၊သင်တန်းများပေးခြင်း၊ ကျမ်းစာကျောင်း၌စာသင်ကြားအားဖြင့်၄င်း၊ Sunday School သင်ကြားပေးခြင်းဟုမ်းဆဲလ်များတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ပြီး လက်ရှိတာဝန်ယူထားသည့်နယ်မြေမှာ မှော်ဘီစမ်းချောင်းပေါက်ရဲ့ ဧဝံဂေလိ တာဝန်ခံဖြစ်ပြီး အလုံ – ကြည့်မြင်တိုင် နယ်မြေတာဝန်ခံအနေနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဆက်ကပ်နေပါသည်။
၂၀ဝ၄ ခုနှစ် ၊ဧပြီ ၂၁ တွင် အဖ – ဦးဂင်ဒိုထန် အမိ – ဒေါ်လွန့်ခန့်ဝုန် တို့၏သားဖြစ်သူဦးခမ်ခန့်လျန်းထန်ကိမ်း နှင့် အိမ်ထောင်ပြုပြီး ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်၂၀၁၉ ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့တွင် သားလေး ထန်ရှင်းတာန် ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ – အမှတ်(၅၀ဝ)ကမ်းနားလမ်း၊သီတာရပ်ကွက်၊
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။